ကှယျလှနျသှားပီဖွဈတဲ့ မိခငျကွီး ငှအေလိမျခံခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးလေးပွနျပွောပွရငျး ပရိတျသတျတှကေို သတိထားဖို့ ထပျပွောလိုကျတဲ့ Russell – Shwe Likes
Edit : အခု အမလေညျး ဆုံးသှားပွီဆိုတော့ …. လူကွီးတှေ သိရအောငျ ပွနျတငျပေးလိုကျပါတယျ …. အဆငျမပွရေငျ ကြျောသှားလိုကျပါနျော 🙏
ဒီ Post ကို ကြှနျတျော မ Share ပဲနမေလို့ စညျးစားပါသေးတယျ…. မရတော့တဲ့ အခွအေနမေို့ အမြားသိစရေနျ ရငျနာနာနဲ့ပဲ Share လိုကျပါတယျ ခငျမြ….
ဖွဈပုံက ၂၀၁၅ October လောကျက ပါ…. အဲ့တုနျးက ရကွေီးပွီး လူအမြားစု အလှူခံတှထှေကျနတေဲ့ အခြိနျပါ…. ကြှနျတျောလညျး အမြားနဲ့အတူ အိမျမကျဆုံရာက ဘျောဒါတှနေဲ့ အလှူခံထှကျပွီး Gandama Wholesale မှာလှူမယျ့ပစ်စညျးတှေ သှားဝယျမလို့ သှားနပေါတယျ… အခြိနျကတော့ မနကျ ၁၀:၀၀ လောကျဖွဈမယျထငျတယျ…. Taxi ထဲမှာ အိမျမကျဆုံရာက Leo လညျးပါပါတယျ….
အဲ့အခြိနျမှာ အမရေဲ့ ၄ယောကျမွောကျညီမ ( အမကေ မောငျနှမငါးယောကျထဲ အကွီးဆုံး ) ကကြှနျတေျာ့ကိုပွောပါတယျ…. သူက စိုးရိမျတကွီးနဲ့ ဖုနျးထဲမှာပွောပါတယျ…. ” သား….ဖိုးဉာဏျ…. သားအမေ အခုပဲ သိနျးတရာခြေးသှားလို့….. သူ့ကွညျ့ရတာ အရေးတကွီး လိုနပေုံပဲ….လာမယျ့ Sunday ပွနျဆကျမယျပွောတယျ…. ” ( အဲ့နကေ့ ဗုဒ်ဓဟူး နပေ့ါ )….
အဲ့မှာ ကြှနျနျောက အံ့အားသငျ့သှားပွီး…. ” သိနျး ၁၀၀ ????? အနျတီ…. မကွေီးက ဘာလို့ ခြေးရတာလဲ….. ကနြျောလဲဘာမှ မသိရပါလား??? ဘာအတှကျလို့ပွောလဲ…. အနျတီ ??? ” လို့မေးလိုကျတော့ သူက ” မကွီးက စီးပှားရေး လုပျဖို့ပွောတာပဲ…. နိုငျငံခွား ကုမ်ပဏီတဈခုနဲ့ စီးပှားရေးလုပျဖို့ အရငျးအနှီးလိုတယျ….တဲ့…. သိပျမကွာဘူး ပွနျဆပျမယျပွောတယျ…. အဲ့တာ မေးကွညျ့လိုကျပါဦးဟယျ…. ငါ့မှာလဲ ဘဏျထဲရှိတာအကုနျပဲ ပေးလိုကျတာ….မကွာဘူးပွနျပေးမယျပွောလို့….. “…
အဲ့အခြိနျမှာ ကနြျောစဉျးစားမိတာက အမကေ အဲ့အလုပျကိစ်စနဲ့ ပါတျသတျပွီး တဈခါမှ မပွောဘူးပါဘူး… အစိုးရဝနျထမျး ဆိုတော့ စီးပှားရေးလညျး သူမကြှမျးကငျြဘူးလေ…. ကပျြ ၁၀၀၀ ရငျးပွီး ၁၀၀ တောငျမွတျအောငျမလုပျတတျသူပါ…. ကိုယျ့အမအေကွောငျး ကိုယျသိနတေော့ စိုးရိမျသှားပွီး ခကျြခငျြးဖုနျးဆကျကွညျ့တော့သူက…. ” အခုနိုငျငံခွား ကုမ်ပဏီတဈခုနဲ့ အလုပျလုပျနတေယျ….အိမျရောကျမှ ပွောပွမယျ….” ဆိုပွီးဖုနျးခသြှားလရေဲ့…..
ဒါနဲ့ ထပျဆကျကွညျ့တော့ သူကစိတျမရှညျစှာနဲ့ “ငါနိုငျငံခွားနဲ့ အလုပျလုပျနတေယျ…. ဝငျမပါနဲ့….အခြိနျတနျရငျ သိရမယျ… ” ဆိုပွီးဖုနျးခလြိုကျပါတယျ…. ဖုနျးကမကပြဲ အသံတှဆေကျကွားနရေတော့ ကနြျောက Speaker ဖှငျ့ပွီး နားထောငျလိုကျပါတယျ… သူပွောနတောက နိုငျငံခွား Bank account တဈခုကို ပိုကျဆံလှဲဖို့အမြိုးသားတဈဦးနဲ့ ပွောနတောပါ….. အမေးအဖွတှေလေုပျနရေငျးနဲ့ ဖုနျးကသြှားတယျ…. ကနြျောလညျး ပရဟိတကိစ်စနဲ့ လောနတောမို့ မသှေ့ားပွီးတော့ အိမျရောကျတော့ ပငျပနျးတာနဲ့ တနျးအိပျပြျောသှားတာပါပဲ….
ဒီလိုနဲ့ ည ၁၁ လောကျကတြော့ ကနြျောနိုးလာပါတယျ…. နိုးလာတော့ ခကျြခငျြးအမကေို့ သတိရသှားပွီး လှမျးချေါလိုကျပါတယျ….သူက အိမျခနျးထဲကနေ ဖုနျးတဈလုံးနဲ့ ထှကျလာပါတယျ…. ကနြျောနဲ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ဆိုဖာပျေါမှာထိုငျလိုကျပွီး သူကပွုံးပွုံးကွီးနဲ့ကွညျ့ပွီး မေးတယျ…. ” ကဲ…ပွော… ” ….အဲ့တာနဲ့ ကနြျောက “အမေ… မနကျက သိနျး ၁၀၀ ကိစ်စ ပွောဦး… ဘာစီးပှားရေး အတှကျလဲ…. ?” ဆိုတော့ သူက ပွုံးပွီးဖွတေယျ…. “ငါနောကျအိမျထောငျပွုတော့မယျ….. “တဲ့…
အဲ့အခြိနျမှာ ညအိပျလာစောငျ့ပေးတဲ့ Leo ရယျကနြျောရယျ တဈယောကျမကျြနှာတဈယောကျကွညျ့ပွီး ပွုံးစိစိဖွဈသှားပါတယျ…. ( အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ သူ့ကိုနောငျအိမျထောငျပွုတာ မပွုတာထကျ သူပြျောဖို့အဓိက ဆိုတာပဲ ရငျထဲရှိတာပါ… ) ….အဲ့တာနဲ့ ” ဘယျသူလဲ…??? ဘယျကလဲ ???? ဘာအလုပျလုပျလဲ??? ဘယျလိုသိကွတာလဲ ??? ” မေးခှနျးတှမေေးမွနျးရတာပေါ့… အဲ့တာနဲ့သူက ” သူ့နာမညျက George ( ဆိုပါတော့ ) …..
သူက American Army က ဗိုလျခြုပျကွီး General တဈယောကျ….တဈခုလပျ…. သားသမီးတော့ရှိတယျ…. ဆုတှလေညျးအမြားကွီးရထားတယျ…. fb သုံးရငျး ဆုံကွတာပေါ့…. Fb မှာခငျနတောကွာပွီ….သူက အခု Propose လုပျထားတယျ…. လာမယျ့ December ကရြငျ ရနျကုနျလာမယျ…. ငါ့ကို One million Dollar နဲ့လာတငျတောငျးမယျ ပွောတယျ…. ငါကလညျးလကျခံလိုကျတယျ…. နငျလညျး Us visa တှဘောတှေ လုပျထားဦး….အဆငျပွရေငျ အားလုံးဟိုမှာ အေးဆေးနရေုံပဲ…. ” ဆိုတာနဲ့ ကနြျော ခေါငျးကွီးသှားပါတယျ…. ” အမေ မနကျက သိနျး ၁၀၀ ကိစ်စကရော….? ” ဆိုတော့
သူက ” အခု George က Indonesia မှာအခွကေနြတေယျ…. စဈတပျကလှတျထားတာ…. အခု Case တဈခုကွောငျ့ကွာနတော…. သူ့ Visa card ကလညျးပကျြနတေော့ သူ့မှာ Hotel ခ တှရှေငျးဖို့ အခကျအခဲဖွဈနတေယျ….အဲ့တာကွောငျ့ ဒီကနေ Hotel ခတှလှေမျးပို့ပေးနရေတာ…. December ကြ…သူလာလို့ရှိရငျ George တငျတောငျးမယျ့ One million Dollar ထဲက ဆပျလိုကျရုံပဲ…. ” လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ ကနြျောထပျမေးလိုကျပါတယျ…. “
အခုအဲ့သိနျး ၁၀၀ ရော ???? ” ဆိုတော့ ” ၉လပိုငျးတုနျးက မ** ဆီက ၂၃သိနျး ခြေးပွီး ပို့ထားတာ….အခုသူက လောနလေို့ သိနျး ၁၀၀ ထဲက ဆပျလိုကျတယျ…. ” ကနြျောက ” အာ့ဆိုကနျြတဲ့ ၇၇ သိနျးရော….အမေ…. ” ဆိုတော့ ” Indonesia bank account ကိုအကုနျပို့လိုကျပွီ ” လို့သှေးအေးအေးနဲ့ဖွပေါတယျ…. အဲ့တာနဲ့ အဲ့ George ဆိုတဲ့လူရဲ့ Fb Account ကိုယူကွညျ့မိတော့ သူ့မှာ
– ဝါးတားတား Profile pic ရယျ
– ၂၀၁၃ ကတငျထားတဲ့ လယောဉျပြံပုံ ရယျ
ကနြေျာ့ အမပေုံနဲ့ Cover pic ရယျဒါပဲရှိပါတယျ….
ကနျြတဲ့ Personal info တှလေညျး ဘာတဈခုမှမရှိတာနဲ့ သူ့ Profile Pic ကို download လုပျပွီး Google Search မှာရှာမိတော့ အဲ့လူက George နာမညျနဲ့မဟုတျပဲ အခွားနာမညျနဲ့ တကယျ့လူတဈယောကျဖွဈနပေါတယျ….သူမှာလညျး လကျရှိအိမျထောငျနဲ့ ကလေးတှနေဲ့ အမကေနြေျာ့ကိုပွတဲ့ သူဆုရထားတဲ့ ဓာတျပုံတှလေညျး တနျးစီတှလေို့ကျပါတယျ….
အဲ့အခြိနျမှာ ကနြျော အရမျးလနျ့သှားပွီး ” အမေ !!!!! အဲ့တာ Acc အတုကွီး….. အမကေို့ လိမျစားသှားတာ…. ပုံအစဈတှနေဲ့ လူလိမျလုပျသှားတာ…..!!!!! ” ဆိုပွီး ကနြျောက အသားတှေ တဈဆကျဆကျတုနျနခြေိနျမှာ သူ့မှာတော့ စိုးရိမျစိတျတောငျမပွပါဘူး…. ” အဲ့လိုမြိုး ရှိလို့လား…. ငါနဲ့စကားပွောနတော အကောငျးပါပဲ…. နငျမှားတာနမှောပါ ….” ဆိုပွီး ကနြေျာ့ကို အသညျးယားအောငျတောငျ ဖွလေိုကျပါတယျ….
အဲ့အခြိနျမှာ Leo က ” အနျတီ အလိမျခံလိုကျရပွီ…. အခုလို Online မှာလိမျစားနတေဲ့ လူတှအေမြားကွီးပဲ….အစထဲက Russell ကိုတိုငျပငျသငျ့တယျ…. ” ဆိုတော့ ကနြေျာ့မှာ ခေါငျးထဲရှိတာက ကနြျောတို့ ကိုယျပိုငျ ပိုကျဆံမဟုတျတဲ့ သူမြားပိုကျဆံ သိနျး ၁၀၀ ပါပဲ …
အခြိနျကလညျး ည ၁၂နာရီနီးနပွေီ…. ” မနကျက ငှလှေဲတဲ့နရောကိုဖုနျးဆကျမယျ….ဖုနျးနံပါတျပေး…”ဆိုတော့ ” ဟာ…..ဒီအခြိနျသူမြားတှေ အိပျနပွေီ…. မနကျကမြှ ဆကျ…. ” ဆိုတာနဲ့ ကနြျောက ” မရဘူး….!!!! အခုခကျြခငျြး ဆကျမယျ !!!! ဖုနျးနံပါတျပေး !!!!!!!! ” ဆိုပွီး ကြိမျးမောငျးတော့မှ သူက ဖုနျးချေါပေးပါတယျ… ဖုနျးချေါတော့ သူက ကိုငျပွီး ကနြျောက ဖွဈကွောငျးကုနျစဉျပွောပွလိုကျတော့မှ အဲ့လူကပွောတာက ” ကနြျောလညျး အမကွီးကိုပွောပါတယျ…. ဘာ ph no. Address. မှတျပုံတငျ မှ မရှိတဲ့ Account ကို ရရသိနျးလုံးပို့မှာ သခြောရဲ့လားဗြာ…???? ” လိုမေးတော့
အမကေ ” သခြောတယျ….ပို့လိုကျပါ…. ” လို့ပွောပါတယျ…. အဲ့လိုနဲ့ ကနြျောက ” အခု ပိုကျဆံတှေ ပွနျလိုခငျြလို့…. အကို ကနြေျာ့ကို ကူညီပေးပါ…. ” ပွောတော့မှ ” မနကျစောစော ၉ နာရီလောကျလာခဲ့ပါ… ကနြျော ရသလောကျ ကူညီပေးမယျ…. ” ဆိုတာနဲ့ ခကျြခငျြးနောကျနမေ့နကျ ကနြျော ၈နာရီထဲက သှားစောငျ့နပေါတယျ…. ကံကောငျးခငျြတော့ ပို့လိုကျတဲ့ပိုကျဆံတှကေ Indonesia ဆီမရောကျသေးပဲ Bankgok ကသူတို့ရုံးခှဲ Account မှာပဲရှိနသေေးတော့ ကနြျောမှာ ပြျောသှားတဲ့အပြျောက ဘာနဲ့မှလဲလိုရမယျ မထငျပါဘူးဗြာ….. ငှတှေပွေနျထုတျတော့ ငှအေပွောငျးအလဲနဲ့ ၄သိနျးလောကျဆုံးသှားပါတယျ…
၇၃သိနျးပွနျရလညျးမနညျးဘူး…ဆိုပွီး အဒျေါကိုသှားပေးပွီးတာနဲ့ ကနြျော တှေးနတောက သိနျး၁၀၀ ထဲက အဒေျါ့ကိုပေးရမယျ့ ၂၇ သိနျးကိုတော့ ဖွေးဖွေးခငျြးဆကျသှားမယျပေါ့…. အဒျေါကလညျး ” အတိုးမယူဘူး….ရရငျရသလိုလာဆပျနျော ” ဆိုလို့ ကနြေျာ့မှာ အလုံးကွီးကသြှားခြိနျမှာ အမဆေီ့က ထပျကွားရတဲ့ စကားကွောငျ့ သတျသခေငျြစိတျပေါကျသှားပါတယျ….
အဲ့တာကတော့ အဲ့ George ဆိုတဲ့ကောငျကို ကနြျောတို့မသိခငျ ၆လပိုငျးထဲက အဲ့ကောငျက လစဉျပုံမှနျ ပိုကျဆံတှတေောငျးနတောတဲ့ဗြာ…..
၆ လပိုငျးတုနျးက ၂၂ သိနျး
၇ လပိုငျးတုနျးက ၂၅ သိနျး
၈ လပိုငျးတုနျးက ၂၂သိနျး ပေါငျး ၆၉ သိနျး လူသုံးယောကျစီမှာ ပတျပွီးခြေးထားပါတယျတဲ့….ကနြျောရူးပွီလဗြော….. သီခငျြးတဈပှဲဆိုရငျ ၅သောငျး ၁သိနျးထကျပိုမရသေးတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျတောငျမသိလိုကျ မွငျတောငျမမွငျလိုကျရတဲ့ ၉၆ သိနျးကို ကနြျောဘယျကနေ ဆပျရမှာလဲ…. ပွီးတော့ သူကလှယျလှယျလေးပွောတယျ ” အိမျရောငျးမယျ…. အခနျးငှားနမေယျ ” ဆိုတော့ ဒီခတျေကွီးမှာ အခနျးငှားနရေတာ ဘယျလောကျခကျလဲဆိုတာ ကနြျောအသိဆုံး….ဘယျလိုနညျးနဲမှ အိမျတော့အရောငျးမခံနိုငျဘူး ရအောငျဆပျမယျဆိုပွီး အားတငျးရငျးနဲ့….. ငိုလိုကျ စိတျဓာတျတှကေလြိုကျ ရူးမလိုဖွဈလိုကျ သခေငျြလိုကျနဲ့ ကနြျောဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျတယျ….
ဖွဈပွီးတာတှလေညျး ပွီးပွီ…. သူ့ကိုလညျး နောကျနောငျဒီလိုကိစ်စတှထေပျမဖွဈဖို့ ကတိပေးပါ…ရအောငျဆပျပေးမယျ… ဘယျလိုနညျးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ ရအောငျရှာမယျ…. လို့ဆုံးဖွတျခကျြခရြငျးနဲ့ပဲ သီခငျြးတှဆေိုလိုကျ Mc တှလေုပျလိုကျ ကွျောငွာလေးပွေးရိုကျလိုကျနဲ့ပဲ ဒီနတေ့ော့ ရှိသမြှအကွှေးမြား လုံးဝကွသှေားပါပွီ….သူလညျး လုံးဝမှတျသှားပါပွီ….မမှတျလညျးမရတော့တဲ့ အခွအေနပေါ….
ကနြျောပွောခငျြတာက အခုလိုကိစ်စတှဖွေဈပွီးတဲ့နောကျမှာ အခုလိုပဲ ဖွဈရပျတှအေမြားကွီးရှိတယျဆိုတာပါပဲ…. အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးထဲက လူကွီးပိုငျးတှလေညျးပါတယျပွောကွတယျ….တဈခြို့ဆို အိမျတှခွေံတှေ ပိုငျဆိုငျမှုတှပေါ ရောငျးပွီး အိမျငှားနရေတဲ့ဘဝ ရောကျသှားကွတယျ…. ကနြျောက ဒီလောကျနဲ့ပဲမို့ တျောသေးတယျပွောရမယျ….
ဒါကရှကျစရာမဟုတျပါဘူး…. အသကျကွီးတဲ့လူတှကေို ပဈမထားကွပါနဲ့…. အထူးသဖွငျ့ Social media မှာ အထူးသတိထားပါ…. ဖွဈနိုငျရငျ Password တှသေိအောငျလုပျပါ…. ကိုယျတိုငျ Superviseလုပျပေးပါ….အခြိနျလှနျ အသကျကွီးမှ ဒုက်ခရောကျမယျ့အဖွဈမြိုး မကွုံရပါစနေဲ့လို့ဆုတောငျးရငျး အဆုံးသတျလိုကျပါတယျ…..Source;Russell
Edit : အခု အမေလည်း ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ …. လူကြီးတွေ သိရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် …. အဆင်မပြေရင် ကျော်သွားလိုက်ပါနော် 🙏
ဒီ Post ကို ကျွန်တော် မ Share ပဲနေမလို့ စည်းစားပါသေးတယ်…. မရတော့တဲ့ အခြေအနေမို့ အများသိစေရန် ရင်နာနာနဲ့ပဲ Share လိုက်ပါတယ် ခင်မျ….
ဖြစ်ပုံက ၂၀၁၅ October လောက်က ပါ…. အဲ့တုန်းက ရေကြီးပြီး လူအများစု အလှူခံတွေထွက်နေတဲ့ အချိန်ပါ…. ကျွန်တော်လည်း အများနဲ့အတူ အိမ်မက်ဆုံရာက ဘော်ဒါတွေနဲ့ အလှူခံထွက်ပြီး Gandama Wholesale မှာလှူမယ့်ပစ္စည်းတွေ သွားဝယ်မလို့ သွားနေပါတယ်… အချိန်ကတော့ မနက် ၁၀:၀၀ လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်…. Taxi ထဲမှာ အိမ်မက်ဆုံရာက Leo လည်းပါပါတယ်….
အဲ့အချိန်မှာ အမေ့ရဲ့ ၄ယောက်မြောက်ညီမ ( အမေက မောင်နှမငါးယောက်ထဲ အကြီးဆုံး ) ကကျွန်တော့်ကိုပြောပါတယ်…. သူက စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ဖုန်းထဲမှာပြောပါတယ်…. ” သား….ဖိုးဉာဏ်…. သားအမေ အခုပဲ သိန်းတရာချေးသွားလို့….. သူ့ကြည့်ရတာ အရေးတကြီး လိုနေပုံပဲ….လာမယ့် Sunday ပြန်ဆက်မယ်ပြောတယ်…. ” ( အဲ့နေ့က ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ပါ )….
အဲ့မှာ ကျွန်နော်က အံ့အားသင့်သွားပြီး…. ” သိန်း ၁၀၀ ????? အန်တီ…. မေကြီးက ဘာလို့ ချေးရတာလဲ….. ကျနော်လဲဘာမှ မသိရပါလား??? ဘာအတွက်လို့ပြောလဲ…. အန်တီ ??? ” လို့မေးလိုက်တော့ သူက ” မကြီးက စီးပွားရေး လုပ်ဖို့ပြောတာပဲ…. နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ အရင်းအနှီးလိုတယ်….တဲ့…. သိပ်မကြာဘူး ပြန်ဆပ်မယ်ပြောတယ်…. အဲ့တာ မေးကြည့်လိုက်ပါဦးဟယ်…. ငါ့မှာလဲ ဘဏ်ထဲရှိတာအကုန်ပဲ ပေးလိုက်တာ….မကြာဘူးပြန်ပေးမယ်ပြောလို့….. “…
အဲ့အချိန်မှာ ကျနော်စဉ်းစားမိတာက အမေက အဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး တစ်ခါမှ မပြောဘူးပါဘူး… အစိုးရဝန်ထမ်း ဆိုတော့ စီးပွားရေးလည်း သူမကျွမ်းကျင်ဘူးလေ…. ကျပ် ၁၀၀၀ ရင်းပြီး ၁၀၀ တောင်မြတ်အောင်မလုပ်တတ်သူပါ…. ကိုယ့်အမေအကြောင်း ကိုယ်သိနေတော့ စိုးရိမ်သွားပြီး ချက်ချင်းဖုန်းဆက်ကြည့်တော့သူက…. ” အခုနိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတယ်….အိမ်ရောက်မှ ပြောပြမယ်….” ဆိုပြီးဖုန်းချသွားလေရဲ့…..
ဒါနဲ့ ထပ်ဆက်ကြည့်တော့ သူကစိတ်မရှည်စွာနဲ့ “ငါနိုင်ငံခြားနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတယ်…. ဝင်မပါနဲ့….အချိန်တန်ရင် သိရမယ်… ” ဆိုပြီးဖုန်းချလိုက်ပါတယ်…. ဖုန်းကမကျပဲ အသံတွေဆက်ကြားနေရတော့ ကျနော်က Speaker ဖွင့်ပြီး နားထောင်လိုက်ပါတယ်… သူပြောနေတာက နိုင်ငံခြား Bank account တစ်ခုကို ပိုက်ဆံလွှဲဖို့အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ ပြောနေတာပါ….. အမေးအဖြေတွေလုပ်နေရင်းနဲ့ ဖုန်းကျသွားတယ်…. ကျနော်လည်း ပရဟိတကိစ္စနဲ့ လောနေတာမို့ မေ့သွားပြီးတော့ အိမ်ရောက်တော့ ပင်ပန်းတာနဲ့ တန်းအိပ်ပျော်သွားတာပါပဲ….
ဒီလိုနဲ့ ည ၁၁ လောက်ကျတော့ ကျနော်နိုးလာပါတယ်…. နိုးလာတော့ ချက်ချင်းအမေ့ကို သတိရသွားပြီး လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်….သူက အိမ်ခန်းထဲကနေ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ထွက်လာပါတယ်…. ကျနော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီး သူကပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ကြည့်ပြီး မေးတယ်…. ” ကဲ…ပြော… ” ….အဲ့တာနဲ့ ကျနော်က “အမေ… မနက်က သိန်း ၁၀၀ ကိစ္စ ပြောဦး… ဘာစီးပွားရေး အတွက်လဲ…. ?” ဆိုတော့ သူက ပြုံးပြီးဖြေတယ်…. “ငါနောက်အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်….. “တဲ့…
အဲ့အချိန်မှာ ညအိပ်လာစောင့်ပေးတဲ့ Leo ရယ်ကျနော်ရယ် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ပြုံးစိစိဖြစ်သွားပါတယ်…. ( အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူ့ကိုနောင်အိမ်ထောင်ပြုတာ မပြုတာထက် သူပျော်ဖို့အဓိက ဆိုတာပဲ ရင်ထဲရှိတာပါ… ) ….အဲ့တာနဲ့ ” ဘယ်သူလဲ…??? ဘယ်ကလဲ ???? ဘာအလုပ်လုပ်လဲ??? ဘယ်လိုသိကြတာလဲ ??? ” မေးခွန်းတွေမေးမြန်းရတာပေါ့… အဲ့တာနဲ့သူက ” သူ့နာမည်က George ( ဆိုပါတော့ ) …..
သူက American Army က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး General တစ်ယောက်….တစ်ခုလပ်…. သားသမီးတော့ရှိတယ်…. ဆုတွေလည်းအများကြီးရထားတယ်…. fb သုံးရင်း ဆုံကြတာပေါ့…. Fb မှာခင်နေတာကြာပြီ….သူက အခု Propose လုပ်ထားတယ်…. လာမယ့် December ကျရင် ရန်ကုန်လာမယ်…. ငါ့ကို One million Dollar နဲ့လာတင်တောင်းမယ် ပြောတယ်…. ငါကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်…. နင်လည်း Us visa တွေဘာတွေ လုပ်ထားဦး….အဆင်ပြေရင် အားလုံးဟိုမှာ အေးဆေးနေရုံပဲ…. ” ဆိုတာနဲ့ ကျနော် ခေါင်းကြီးသွားပါတယ်…. ” အမေ မနက်က သိန်း ၁၀၀ ကိစ္စကရော….? ” ဆိုတော့
သူက ” အခု George က Indonesia မှာအခြေကျနေတယ်…. စစ်တပ်ကလွှတ်ထားတာ…. အခု Case တစ်ခုကြောင့်ကြာနေတာ…. သူ့ Visa card ကလည်းပျက်နေတော့ သူ့မှာ Hotel ခ တွေရှင်းဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်….အဲ့တာကြောင့် ဒီကနေ Hotel ခတွေလှမ်းပို့ပေးနေရတာ…. December ကျ…သူလာလို့ရှိရင် George တင်တောင်းမယ့် One million Dollar ထဲက ဆပ်လိုက်ရုံပဲ…. ” လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျနော်ထပ်မေးလိုက်ပါတယ်…. ”
အခုအဲ့သိန်း ၁၀၀ ရော ???? ” ဆိုတော့ ” ၉လပိုင်းတုန်းက မ** ဆီက ၂၃သိန်း ချေးပြီး ပို့ထားတာ….အခုသူက လောနေလို့ သိန်း ၁၀၀ ထဲက ဆပ်လိုက်တယ်…. ” ကျနော်က ” အာ့ဆိုကျန်တဲ့ ၇၇ သိန်းရော….အမေ…. ” ဆိုတော့ ” Indonesia bank account ကိုအကုန်ပို့လိုက်ပြီ ” လို့သွေးအေးအေးနဲ့ဖြေပါတယ်…. အဲ့တာနဲ့ အဲ့ George ဆိုတဲ့လူရဲ့ Fb Account ကိုယူကြည့်မိတော့ သူ့မှာ
– ဝါးတားတား Profile pic ရယ်
– ၂၀၁၃ ကတင်ထားတဲ့ လေယာဉ်ပျံပုံ ရယ်
ကျနော့် အမေပုံနဲ့ Cover pic ရယ်ဒါပဲရှိပါတယ်….
ကျန်တဲ့ Personal info တွေလည်း ဘာတစ်ခုမှမရှိတာနဲ့ သူ့ Profile Pic ကို download လုပ်ပြီး Google Search မှာရှာမိတော့ အဲ့လူက George နာမည်နဲ့မဟုတ်ပဲ အခြားနာမည်နဲ့ တကယ့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်….သူမှာလည်း လက်ရှိအိမ်ထောင်နဲ့ ကလေးတွေနဲ့ အမေကျနော့်ကိုပြတဲ့ သူဆုရထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလည်း တန်းစီတွေ့လိုက်ပါတယ်….
အဲ့အချိန်မှာ ကျနော် အရမ်းလန့်သွားပြီး ” အမေ !!!!! အဲ့တာ Acc အတုကြီး….. အမေ့ကို လိမ်စားသွားတာ…. ပုံအစစ်တွေနဲ့ လူလိမ်လုပ်သွားတာ…..!!!!! ” ဆိုပြီး ကျနော်က အသားတွေ တစ်ဆက်ဆက်တုန်နေချိန်မှာ သူ့မှာတော့ စိုးရိမ်စိတ်တောင်မပြပါဘူး…. ” အဲ့လိုမျိုး ရှိလို့လား…. ငါနဲ့စကားပြောနေတာ အကောင်းပါပဲ…. နင်မှားတာနေမှာပါ ….” ဆိုပြီး ကျနော့်ကို အသည်းယားအောင်တောင် ဖြေလိုက်ပါတယ်….
အဲ့အချိန်မှာ Leo က ” အန်တီ အလိမ်ခံလိုက်ရပြီ…. အခုလို Online မှာလိမ်စားနေတဲ့ လူတွေအများကြီးပဲ….အစထဲက Russell ကိုတိုင်ပင်သင့်တယ်…. ” ဆိုတော့ ကျနော့်မှာ ခေါင်းထဲရှိတာက ကျနော်တို့ ကိုယ်ပိုင် ပိုက်ဆံမဟုတ်တဲ့ သူများပိုက်ဆံ သိန်း ၁၀၀ ပါပဲ …
အချိန်ကလည်း ည ၁၂နာရီနီးနေပြီ…. ” မနက်က ငွေလွှဲတဲ့နေရာကိုဖုန်းဆက်မယ်….ဖုန်းနံပါတ်ပေး…”ဆိုတော့ ” ဟာ…..ဒီအချိန်သူများတွေ အိပ်နေပြီ…. မနက်ကျမှ ဆက်…. ” ဆိုတာနဲ့ ကျနော်က ” မရဘူး….!!!! အခုချက်ချင်း ဆက်မယ် !!!! ဖုန်းနံပါတ်ပေး !!!!!!!! ” ဆိုပြီး ကျိမ်းမောင်းတော့မှ သူက ဖုန်းခေါ်ပေးပါတယ်… ဖုန်းခေါ်တော့ သူက ကိုင်ပြီး ကျနော်က ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ပြောပြလိုက်တော့မှ အဲ့လူကပြောတာက ” ကျနော်လည်း အမကြီးကိုပြောပါတယ်…. ဘာ ph no. Address. မှတ်ပုံတင် မှ မရှိတဲ့ Account ကို ရရသိန်းလုံးပို့မှာ သေချာရဲ့လားဗျာ…???? ” လိုမေးတော့
အမေက ” သေချာတယ်….ပို့လိုက်ပါ…. ” လို့ပြောပါတယ်…. အဲ့လိုနဲ့ ကျနော်က ” အခု ပိုက်ဆံတွေ ပြန်လိုချင်လို့…. အကို ကျနော့်ကို ကူညီပေးပါ…. ” ပြောတော့မှ ” မနက်စောစော ၉ နာရီလောက်လာခဲ့ပါ… ကျနော် ရသလောက် ကူညီပေးမယ်…. ” ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းနောက်နေ့မနက် ကျနော် ၈နာရီထဲက သွားစောင့်နေပါတယ်…. ကံကောင်းချင်တော့ ပို့လိုက်တဲ့ပိုက်ဆံတွေက Indonesia ဆီမရောက်သေးပဲ Bankgok ကသူတို့ရုံးခွဲ Account မှာပဲရှိနေသေးတော့ ကျနော်မှာ ပျော်သွားတဲ့အပျော်က ဘာနဲ့မှလဲလိုရမယ် မထင်ပါဘူးဗျာ….. ငွေတွေပြန်ထုတ်တော့ ငွေအပြောင်းအလဲနဲ့ ၄သိန်းလောက်ဆုံးသွားပါတယ်…
၇၃သိန်းပြန်ရလည်းမနည်းဘူး…ဆိုပြီး အဒေါ်ကိုသွားပေးပြီးတာနဲ့ ကျနော် တွေးနေတာက သိန်း၁၀၀ ထဲက အဒေါ့်ကိုပေးရမယ့် ၂၇ သိန်းကိုတော့ ဖြေးဖြေးချင်းဆက်သွားမယ်ပေါ့…. အဒေါ်ကလည်း ” အတိုးမယူဘူး….ရရင်ရသလိုလာဆပ်နော် ” ဆိုလို့ ကျနော့်မှာ အလုံးကြီးကျသွားချိန်မှာ အမေ့ဆီက ထပ်ကြားရတဲ့ စကားကြောင့် သတ်သေချင်စိတ်ပေါက်သွားပါတယ်….
အဲ့တာကတော့ အဲ့ George ဆိုတဲ့ကောင်ကို ကျနော်တို့မသိခင် ၆လပိုင်းထဲက အဲ့ကောင်က လစဉ်ပုံမှန် ပိုက်ဆံတွေတောင်းနေတာတဲ့ဗျာ…..
၆ လပိုင်းတုန်းက ၂၂ သိန်း
၇ လပိုင်းတုန်းက ၂၅ သိန်း
၈ လပိုင်းတုန်းက ၂၂သိန်း ပေါင်း ၆၉ သိန်း လူသုံးယောက်စီမှာ ပတ်ပြီးချေးထားပါတယ်တဲ့….ကျနော်ရူးပြီလေဗျာ….. သီချင်းတစ်ပွဲဆိုရင် ၅သောင်း ၁သိန်းထက်ပိုမရသေးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တောင်မသိလိုက် မြင်တောင်မမြင်လိုက်ရတဲ့ ၉၆ သိန်းကို ကျနော်ဘယ်ကနေ ဆပ်ရမှာလဲ…. ပြီးတော့ သူကလွယ်လွယ်လေးပြောတယ် ” အိမ်ရောင်းမယ်…. အခန်းငှားနေမယ် ” ဆိုတော့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အခန်းငှားနေရတာ ဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတာ ကျနော်အသိဆုံး….ဘယ်လိုနည်းနဲမှ အိမ်တော့အရောင်းမခံနိုင်ဘူး ရအောင်ဆပ်မယ်ဆိုပြီး အားတင်းရင်းနဲ့….. ငိုလိုက် စိတ်ဓာတ်တွေကျလိုက် ရူးမလိုဖြစ်လိုက် သေချင်လိုက်နဲ့ ကျနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်….
ဖြစ်ပြီးတာတွေလည်း ပြီးပြီ…. သူ့ကိုလည်း နောက်နောင်ဒီလိုကိစ္စတွေထပ်မဖြစ်ဖို့ ကတိပေးပါ…ရအောင်ဆပ်ပေးမယ်… ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရအောင်ရှာမယ်…. လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်းနဲ့ပဲ သီချင်းတွေဆိုလိုက် Mc တွေလုပ်လိုက် ကြော်ငြာလေးပြေးရိုက်လိုက်နဲ့ပဲ ဒီနေ့တော့ ရှိသမျှအကြွေးများ လုံးဝကြေသွားပါပြီ….သူလည်း လုံးဝမှတ်သွားပါပြီ….မမှတ်လည်းမရတော့တဲ့ အခြေအနေပါ….
ကျနော်ပြောချင်တာက အခုလိုကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အခုလိုပဲ ဖြစ်ရပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ…. အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းထဲက လူကြီးပိုင်းတွေလည်းပါတယ်ပြောကြတယ်….တစ်ချို့ဆို အိမ်တွေခြံတွေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါ ရောင်းပြီး အိမ်ငှားနေရတဲ့ဘဝ ရောက်သွားကြတယ်…. ကျနော်က ဒီလောက်နဲ့ပဲမို့ တော်သေးတယ်ပြောရမယ်….
ဒါကရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး…. အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကို ပစ်မထားကြပါနဲ့…. အထူးသဖြင့် Social media မှာ အထူးသတိထားပါ…. ဖြစ်နိုင်ရင် Password တွေသိအောင်လုပ်ပါ…. ကိုယ်တိုင် Superviseလုပ်ပေးပါ….အချိန်လွန် အသက်ကြီးမှ ဒုက္ခရောက်မယ့်အဖြစ်မျိုး မကြုံရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရင်း အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်…..Source;Russell
လူမသိသူမသိ ခဈြသူအသဈလေးကို ပရိသတျတှေ မွငျတှရေ့အောငျ ခပြွလိုကျတဲ့ နနျးဆုရတီစိုး